ज्योती हुन् या शालु, गोप्य अंगलाई गोप्य नै राख्ने कि ? « Mazzako Online
ज्योती हुन् या शालु, गोप्य अंगलाई गोप्य नै राख्ने कि ?
बलिउड होस् या हलिउड, जसले आफ्नो जवानी देखाउने कोशिश गरेको छ, उसको करिअर ध्वस्त छ । विना मलिक हुन् या पूनम पाण्डे, जसले चर्चा पाउनका लागि जवानी देखाए, अभिनय जिरो हुँदा हिरो बन्न सकेनन् ।
नेपालमा पनि अहिले केही मोडल र गायिका देखिएका छन्, जसलाई देखाएरै चलिन्छ भन्ने विश्वास छ । लोक गायिका ज्योती मगर जो आफ्नो बक्षस्थल देखाएर चलिन्छ भन्ने सोचमा छिन् । उनले बनाउने भिडियो होस् या स्टेज कार्यक्रममा लगाउने पहिरन नै किन नहोस्, ज्योतीको जवानी देखिन्छ, कलाको कदर हुँदैन ।
अर्की मोडल छन् तिर्सना वुढाथोकी । उनको त कुरै नगरौ । फेसबुक, ट्विटरका कारण यीनको पनि चर्चा खुबै हुन्छ । तर, यीनलाई मानिसले सकारात्मक रुपमा हेर्दैनन् । तिर्सना नांगा तस्बिर, नुहाउँदै गरेका तस्बिर सार्वजनिक गर्न माहिर छिन् ।
अर्की मोडल छिन्, शालु गौतम । जो पनि स्टेज कार्यक्रममा बढी व्यस्त छिन् । तर, स्टेज कार्यक्रममा उनीहरुले गर्ने हाउभाउले दर्शकले हुटिङ त गर्छन्, तर सकारात्मक होइन । शालु स्टेजमा बेली डान्स बढी गर्छिन् । उनको यात्रा फिल्म वा भिडियोमा खासै छैन । फेसबुकमा पनि उनी आफ्ना बक्षस्थल कपडाले छोपेर, विकिनी फोटोसुटका तस्बिर हालेर चर्चा कमाउन चाहन्छिन् ।
तर, कलाकारको चर्चा देखाएर होइन अभिनय गरेर हुन्छ भन्ने सुष्मा कार्की जस्ता अभिनेत्रीले त वुझिसके । देखाउनै खोज्दा दर्जनौ अभिनेत्रीले यो क्षेत्रबाट हात धुनु परेको उदाहरण छ ।
जवानी त आउछ जान्छ, अभिनय मर्दैन । यसैले अभिनयलाई अगाडि बढाएर गोप्य नै राख्नु भनेर बनाइएका अंगालाई गोप्य नै राख्ने हो कि ?